China Die Casting မှိုမွေ့ရာထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Dongguan FUYA METAL & Plastic Products Co. , Ltd.
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > မှို > ဟာ့ဒ်ဝဲမှို > သွန်းမှို Die
Die Casting မှိုသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများကိုသွန်းလောင်းရန်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ၎င်းသည်အထူးသွန်းလောင်းသည့်စက်ပေါ်တွင်သေသည့်သတ္တုကိုသွန်းလောင်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုပြီးမြောက်စေရန်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း die casting ၏အခြေခံဖြစ်စဉ်ကို: ပထမသတ္တုအရည်နိမ့်သို့မဟုတ်မြန်နှုန်းမြင့်သတ္တုများပုံသွန်းနှင့်အတူမှိုလိုင်ဖြည်
သွန်းမှို Die isakind of tool for casting metal parts. It isatool for completing the die casting process onaspecial die forging machine. The basic process of die casting is as follows: the metal liquid first fills the mold cavity with low speed or high speed casting, and the mold has the active cavity surface, which is forged under pressure with the cooling process of the metal liquid, which not only eliminates the shrinkage cavity and porosity defects of the blank, but also makes the inner structure of the blank reach the broken grain of forging state. The comprehensive mechanical properties of the blank have been improved remarkably.
၁။ Die Casting မှိုသည်မြင့်မားသောအပူပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ အပူစီးကူးခြင်း၊ ပွန်းပဲ့ခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊
(2) မျက်နှာပြင်အပူပျံ့နှံ့ကုသမှု, မျက်နှာပြင်အဆင့်ပြောင်းလဲမှုကိုခိုင်ခံ့စေခြင်း, လျှပ်စစ်မီးပွားအားကောင်းတဲ့နည်းပညာ, etc အပါအဝင်မျက်နှာပြင်ပြုပြင်မွမ်းမံနည်းပညာ
(၃) လျှပ်ကူးပစ္စည်းအပါအ ၀ င်၊
သေမျက်နှာပြင်အပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောသွန်းလောင်းခြင်းများထုတ်လုပ်ရန်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ မလျော်ကန်သောသို့မဟုတ်မသင့်လျော်သောသေသောသတ္တုများပုံသွန်းလောင်းသောသေသည့်အပူချိန်သည်လည်းရှုထောင့်မတည်ငြိမ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းပုံပျက်မှုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အပူဖိအား၊ မှိုအပူချိန်ကွာခြားချက်ကြီးသောအခါထုတ်လုပ်မှုသံသရာတွင်ပါဝင်သောကိန်းဂဏန်းများသည်ဖြည့်သည့်အချိန်၊ အအေးခံချိန်နှင့်ပက်ဖြန်းချိန်ကဲ့သို့ကွဲပြားသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဒီဂရီရှိသည်။
၁) ။ အအေးခန်း -
အကြောင်းပြချက် - အရည်ပျော်တဲ့ဟင်းချိုရဲ့ရှေ့ဆုံးမှာအပူချိန်အရမ်းနိမ့်ပြီးထပ်နေတဲ့ခြေရာတွေလည်းရှိပါတယ်
၁။ နံရံအထူသိပ်သည်းခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ (ဒီဇိုင်းသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်ခြင်း)၊ ပိုမိုပါးလွှာသည့်နေရာများကိုတိုက်ရိုက်ဖြည့်ရမည်
2. ပုံသဏ္fillာန်သည်ဖြည့်ရန်မလွယ်ကူသည်ကိုစစ်ဆေးပါ။ ဝေးလွန်းသည်၊ ပိတ်ထားသောနေရာများ (ဥပမာ (တောင် (fin)၊ bulges)၊ ပိတ်ထားသောနေရာများ၊ rounded ထောင့်ငယ်များစသည်ဖြင့်ဖြည့်ရန်မလွယ်ကူပါ။ နံရိုးသို့မဟုတ်အစက်အပြောက်များရှိပါကသတိပြုပါ
4. အဆာ mode ကိုပြောင်းလဲပါ
မှိုအပူချိန်တိုးပွားလာ၏ 5. နည်းလမ်းများ
2) ။ အက်ကွဲ:
၃။ ဖိအားပေးမှုအချိန်ပြောင်းလဲမှု (အအေးခန်းစက်)
7. misalignment နှင့်ပုံပျက်သောအဘို့အမှိုစစ်ဆေးပါ
၂။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့အရင်းအမြစ် - ပိုက်၊ အရည်အတွက်၊ အရည်အတွက်အရည်ပျော်ခြင်း
၃။ ထွက်ပေါက်ဆိပ်ကမ်း၏enoughရိယာသည်လုံလောက်မှုရှိကြောင်း၊ ၎င်းကိုပိတ်ဆို့ထားကြောင်းနှင့်၎င်းသည်နောက်ဆုံးဖြည့်စွက်ထားကြောင်းစစ်ဆေးပါ
၄) cavitation တိုက်စားမှု:
အကြောင်းမရှိ - ဖိအားရုတ်တရက်လျှော့ချပေးသောကြောင့်အရည်သုတ်သောဟင်းချိုမှဓာတ်ငွေ့ရုတ်တရက်ကြီးထွားလာခြင်း၊
စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်း၏ Cross- အပိုင်းareaရိယာသိသိသာသာမပြောင်းသင့်ပါတယ်
အကြောင်းပြချက် - သတ္တုတစ်မျိုးသည်အရည်မှအစိုင်အခဲအထိခိုင်မာသွားလျှင်၎င်းသည်နေရာနည်းသည်။ သတ္တုဖြည့်စွက်ခြင်းမရှိပါကပုံမှန်အားဖြင့်အတော်လေးနှေးကွေးသောနေရာ၌ကျုံ့အခေါင်းပေါက်ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်
2. မှိုအပူချိန်ကိုပြောင်းလဲပါ။ မှိုအပူချိန်ကိုလျှော့ချသည်။ တခါတရံသင်ကကျုံ့အခေါင်းပေါက်၏တည်နေရာကိုသာပြောင်းလိုက်သည်
၃။ ၀ င်ခြင်း၊ တံခါးနေရာနှင့်တံခါးနှုန်းကိုပြောင်းလဲပါ
၅။ Pin သေသည့်စက်သည်အခြေအနေကောင်းလားစစ်ဆေးပါ
၇ ။ ဖို
အကြောင်းပြချက် - ပထမသုတ်သောဟင်းချိုအလွှာသည်မြေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အအေးခံသည်။ ဒုတိယအလွှာသည်ပထမအလွှာကိုအရည်ပျော်ရန်မအောင်မြင်သော်လည်း၊
1. တိုးတက်လာသောအဆာ mode ကို
အကြောင်းပြချက် - အရည်ကျိုထားသောဟင်းချိုသည်အလွန်နှေးနှေးနှေးနှေးစီးဆင်းသည်၊ သို့မဟုတ်အလွန်အေးလွန်းသည်သို့မဟုတ်ညံ့ဖျင်းသောအသားဖြည့်သည့်စနစ်ဖြစ်သဖြင့်ခိုင်မာသည့်သတ္တုအဆစ်များတွင်အပေါက်များရှိသည်။
၉) ကွဲနေသောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအပေါက်များ -
အကြောင်းမရှိ: ဒါဟာကျုံ့လိုင်သို့မဟုတ် blowhole ဖြစ်နိုင်သည်
1. ကျုံ့လျှင်, တံခါးအထူလျှော့ချသို့မဟုတ်ရေတွင်းတစ်တွင်းတွင်းဝင်ပေါက်အထူ
၁၄) Sticky mode:
၃။ Angle ကိုဆွဲပါ
5. အဆာ mode ကိုပြောင်းလဲပါ
Hot Tags: Die Casting မှို, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်း